गिट्टी कुट्ने मजदुरलाई १५ दिनलाइ पुग्ने राहत : RajdhaniDaily.com -
Home Uncategorized गिट्टी कुट्ने मजदुरलाई १५ दिनलाइ पुग्ने राहत
सिन्धुली । दैनिक ज्यालादारी गरि जीविकोपार्जन गर्ने मजदुरहरुको खाद्य सुरक्षाको अधिकारलाई मध्येनगर गर्दै राहतको प्याकेज दिने घोषणा गरेको कमलामाई नगरपालिकाले मंगलबार ग्वाङखोलामा गिट्टी कुट्ने मजदुरका परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ ।
कमलामाई नगरपालिकाका मेयर खड्ग खत्री, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सुवेदी र नगर प्रवक्ता कर्णबहादुर घिसिङले घरमै पुगेर राहत वितरण गरेका हुन ।
उक्त प्याकेजमा १० देखि १५ दिनलाई पुग्ने गरि अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीहरु चामल, दाल, आलु, नुन, चिनी, वेसार, तेल लगायत राखिएको छ ।
लक डाउन अवधिमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्ने कमलामाई नगरक्षेत्र भित्रका ३३ जनालाई मंगलबार उक्त राहत उपलब्ध गराईएको कमलामाई नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सागरकुमार ढकालले बताए ।
राहत प्याकेजले १० देखि १५ दिनसम्मको लागि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्याकेजमा, चामल २० के जी, दाल ३ के जी, चिनी १ के जी, आलु २ के जी, बेसार ५० ग्राम, तेल १ लिटर र नुन १ के जी राखिएको छ ।
प्रति प्याकेज १ हजार ८१० रुपैंया बराबरको लागतको रहेको छ । नगरपालिकाले अन्य मजदुरहरुलाई पनि प्याकेज वितरण गरिने जनाएको छ । विशेषगरि दैनिक ज्याला मजदुरी गरि जीविका चलाउनहरुका लागि नगरपालिकाले उक्त प्याकेज ल्याएको जनाएको छ ।
लक डाउनका बेलामा कोहि पनि भोकले मर्न पर्ने अवस्था नआओस भनेर उक्त प्याकेज ल्याईएको नगरपालिकाका मेयर खड्ग खत्रीले बताए । कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनसक्ने भनि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण मजदुरहरुले खान नपाएको गुनासो बढेपछि नगरपालिकाले उक्त अभियान सुरु गरेको हो । नगरपालिकाले नगरभित्रका सबै मजदुरहरुलाई राहत दिने जनाएको छ ।
पहिलो र दोस्रो चरणमा गरि नगरपालिकाले करिब ५ सय जनाको सूचि राहत दिनका लागि तयार गरेको छ भने विपन्न र मजदुरहरु पत्ता लगाउन जनप्रतिनिधिहरु, टोल विकास संस्थाहरुलाई परिचालन गरेको छ ।
Editor-Picks एजेन्सी - March 4, 2021
काठमाडौं । म्यानमारमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट एकै दिन ३८ जनाको मृत्यु भएको छ । सैनिक शासकविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुमाथि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा बुधबार एकै दिन ३८...
सुदूरपश्चिममा एकै दिन ३७ जनामा कोरोना संक्रमण
राजेन्द्र ठगुन्ना - June 8, 2020
डडेल्धुरा । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सोमबार मात्रै ३७ जना कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । कोरोना प्रयोगशाला धनगढीमा गरिएको परिक्षणमा सोमबार ३७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि...
अझै ७४ प्रतिशत जनता स्वच्छ उर्जा बाहिरै
प्रदेश सविन शर्मा - August 26, 2020
काठमाडौं । नेपालमा अझै ७४ प्रतिशत जनताले जैविक ऊर्जाबाट नै खाना पगाउने गरेको पाइएको छ । नेपालमा २५ प्रतिशत जनसंख्या अझै विद्युतको पहुँचभन्दा बाहिर...
कोभिड–१९ : सरकारका लागि अवसर र चुनौती
बिचार श्यामप्रसाद मैनाली - April 20, 2020
कोभिड–१९ बाट आज विश्व संक्रमित भएको छ । हालसम्म करिब २० लाख मानिसमा संक्रमण देखिएकोमा करिब ५ लाख स्वस्थ भई घर फर्किएका...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - May 24, 2020
काठमाडौं । काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा कैदीबन्दीबीच झडप भएको छ । झडपको स्पष्ट कारण खुल्न नसके पनि चौकीदार परिवर्तन र क्यान्टिनको विषय भएको बताइएको छ...
कोरोनाले रोकेन बागी ३ का दर्शकलाई
कला एजेन्सी - March 8, 2020
मुम्बई। टाइगर श्राफको फिल्म ‘बागी–३’को व्यापारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण त्रासका कारण प्रभाव पर्ने डर निर्मातालाई थियो । तर, फिल्मले पहिलो र दोस्रो दिन राम्रो...
प्रदेश भविन कार्की - February 21, 2020
संखुवासभा । शिक्षालाई श्रम सिपलाई उत्पादन र रोजगारी सँग, उत्पादन र रोजगारीलाई समृद्धी सँग जोड्नु पर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा...
प्रदेश २ एम के माझी - January 23, 2021
सप्तरी । मधेशी अधिकारका लागि संगठित अभियानको नेतृत्व गरेका तत्कालिन नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष स्व. गजेन्द्र नारायण सिंहको १९ औं पुण्यतिथि दिवस शनिबार...
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - March 4, 2021
पूर्णभक्त दुवाल - March 5, 2021
सुवास नेम्वाङलाई संसदीय दलको उपनेताबाट हटाइयो, सात नेतामाथि कारबाही